Karnataka Tamil Nadu Tour Tour | | Dana @ + 91-993.702.7574 Kuti Uite.
Karnataka Tamil Nadu Holiday Tour
Kana uchida kurega kudzikama paunogona kutsvaga nzvimbo dzakawanda uye kuva pedyo nemasikirwo, Karnataka Tamil Nadu Holiday Tour inogona kunge yakakosha yepafiri. Pasinei nokuti iwe unoda kurega pagungwa, ona zvivakwa zvinoshamisa kana kudya zvokudya zvinonaka, Karnataka Tamil Nadu Holiday Tour ichava yakakwana. Nzira yekunaka kwekunaka uye inonakidza South India, this amazing Karnataka Tamil Nadu Holiday Tour is more than an experience! Iko pano kuti iwe uchawana mamwe ematemberi akaisvonaka uye masvingo ekugadzirwa kweIndia. Ronga rwendo rwako kuenda kunharaunda yeIndia inonyanya kusimba neKarnataka Tamil Nadu Holiday Tour package. Iyi purogiramu yakazara uye yakaisvonaka yeRivvidian tsika yeIndia. Zvikuru zvikuru zvekushanyira iri kushanyira dzose dzakakurumbira zvinoshanyira vatasvi veKarnataka & Tamil Nadu. Gadzirira kugadzirisa tsika yakasiyana uye inoshamisa yeSouth India neS Sand Pebbles Tour N Travels. Pasi apa ndiyo nzira shomanana yekufambisa.
Bangalore (1Nt) - Mamsapuram (1Nt) - Tiruchirappalli (2Nts) - Kodaikanal (2Nts) - Coimbatore Drop
06 Nights Programme | Mutambo Wokushanyira: 068
ZUVA 01: BANGALORE
Kusvika paAngland ndege / railway station, tora uye uende kuhotera. Bangalore ndiyo guta guru reKarnataka rinozivikanwa zvikuru seGadheji. Manheru anoenderera mberi kwehafu yezuva rekushanyira guta reManthan. Shanyira Lalbagh, Cubbon Park, ISKCON Temple, Vidhana Soudha uye pakupedzisira kuBusiness Street kune zvishoma zvekutenga. Nenguva dzamanheru kudzokera kuhotera uye kugara kweusiku kuBhanada.
ZUVA 02: BANGALORE - MYSORE (140 KM)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kuMessore panzira iyo inoshanyira Srirangapatna iyo yaiva guta raMambo Hyder Ali nemwanakomana wake Tippu Sultan. Pakati peawa masikati pa Mysore uye tarisai kuhotera. Masikati mashanyira Mysore Palace, chimwe chezvikomborero zvikuru zveMesore. Zvadaro kuMoresi Zoo iwe waigona kuona zvimwe zvezvisikwa zvisingaoneki zvemhuka dzesango. Manheru anoenderera mberi kune nyika inonzi mukurumbira Brindavan Gardens yakawedzera pamusoro pe150 acres. Rwiyo rwemhanzi uye chiedza rinoratidza kuwedzerwa kune minda. Dzokera kuhotera uye kugara kweusiku paIndaneti.
ZUVA 03: MYSORE - OOTY (160 KM)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya utarise hotera uende kuOoty munzira uende neBangipur neDamumalai musango. Tarisa kuhotera sezvaunosvika kuOoty. Manheru asingabhadhari kutengesa uye mamwe mabasa uye kugara kweusiku paOoty.
ZUVA 04: OOTY
Mushure mokudya kwekudya chamangwanani, famba nzvimbo inoona kutarisa kweOoty. Enda kune Doddabeta Peak iyo ndiyo yakakwirira kupfuura yeOoty. Kubva pano uchawana panoramic maonero emunzvimbo dzakapoteredza. Masikati masikati kumashure kuOoty town. Manheru mashanyi mumunda unozivikanwa weBotanical wakavakwa mu1847 uye Ooty Lake yakanga iri nzvimbo yekugadzirira ngarava iripo. Ngoro-yakasvikako ichikomberedza dziva zvakare inowanikwa. Manheru ekushanyira Coonoor. Usiku huno paOoty.
ZUVA 05: OOTY - KODAIKANAL (260 KM)
Mushure mokudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kweKodaikanal. Tarisa kuhotera uye manheru panguva yekuzorora. Usiku huno huri pahotera.
ZUVA 06: KODAIKANAL
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwemazuva ekufambisa kwemazuva eKodaikanal akafukidza: Bryant Park, Coaker's walk, Pillar Rock uye Suicide point. Manheru anoshanyira Kodai Lake, iyo yakaitwa nyeredzi yakagadzirwa nyeredzi, inopararira kupfuura makumi matanhatu ekere. Manheru anozodzokera kuhotera uye usiku hwose huri pahotera.
ZUVA 07: KODAIKANAL - COIMBATORE (DEPARTURE)
Mangwanani mushure mekudya kwekudya kwemafuro, tarisa kunze kwehotera uende kuCoimbatore. Drop paCyimbatore munhandare / railway station kuenda mberi.